Veragba ụgwọ TV iji bulie |dị | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 13, 2017 Jessica Hawthorne-Castro
Dọrọ ndị ahịa ọhụrụ ma na-emeziwanye akara ngosi akara aka bụ ihe ịma aka na-adịgide adịgide maka ndị na-ere ahịa. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na-adọpụ uche na ihe ndọpụ uche nke nyocha ọtụtụ, ọ na-esiri ike ịghachite na ọchịchọ nke ndị na-azụ ahịa na ozi ezubere iche. Ndị ahịa na-eche ihe ịma aka a ihu na-atụgharịkarị na "tụba ya na mgbidi iji hụ ma ọ na - arapara" nso, kama usoro atụmatụ echebara echiche nke ọma.
Akụkụ nke atụmatụ a kwesịrị ịgụnye mkpọsa mgbasa ozi TV, nke na-aga n'ihu na-egosi onwe ya dị ka onye na-ajụ ahịa nke nwere ike ire ngwaahịa ma nye nkwado aha nkwado. TV ka dị mkpa ọbụlagodi n'oge ndị a nkewa, ndị ahịa nwere ọgụgụ isi na-atụgharị uche na TV iji nweta ọtụtụ ebumnuche na usoro.
Dekọwa “Mbuli Ebube”
Maka ihe gbasara isiokwu a, "mbuli elu" bụ mmụba dị mma na otu ndị na - ege ntị si ele ụlọ ọrụ na oge ole ha na - eche banyere ya - oke nke "nnyapade." Mkpa maka mbuli elu a dị mkpa maka ọtụtụ ụdị, ọkachasị ndị na-eme ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta ahịrị dị iche iche nke ngwaahịa jikọtara ọnụ. Ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ndị a chọrọ mmesi obi ike na mkpọsa abụghị naanị ịkwalite ahịa nke "Product XYZ" kamakwa na-enye ndị na-ege ntị mmetụta dị mma banyere ika ahụ n'onwe ya na ngwaahịa ndị ọzọ. Dika ndi na ere ahia na-agbasawanye uche ha na metrics n’azụ ịbawanye ahịa maka naanị otu ngwaahịa, ha nwere ike ịlele ezigbo ROI na mmetụta nke mkpọsa. N'iji ozi a, ha nwere ike ịmegharị ihe ngosi ọhụụ na itinye ebe ga-eme n'ọdịnihu iji bulie usoro iji bulie akara elu.
Ubara Ojiji nke Brand Lift Metric
Ọ bụ ezie na ọdịnala na-eji n'ime TV, "akara mbuli" na-abanye ugbu a n'ime vidiyo vidiyo dijitalụ. Nielsen n'oge na-adịbeghị anya malitere Digital Brand Effect nke na-atụle "mbuli akara site na nhazi ọnye" na dịka ụlọ ọrụ ahụ na-enye mkpesa granular na ntinye mgbasa ozi dịka ọ metụtara arụmọrụ saịtị. Aleck Schleider dere na Backlaghachi na Ihe Nlekọta: Ihe Mere eji ebuli ihe eji eme ihe agaghị apụ na ejiji na:
N'ahịa taa, inweta onye na-azụ ihe ịzụta ihe adịghị mfe, mana n'ọtụtụ oge ọ ga-ebido mgbe niile site na ịmatakwu ngwaahịa, nke - n'ikpeazụ site na ugboro ole na izi ozi - ebumnuche.
Ọ na-ewelite isi na ịmara mmata kwesịrị ịbụ ebumnuche bụ isi ọ bụrụ na ọ ga - abụ onye ọkwọ ụgbọ ala mechara maka ịzụrụ.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịhazigharị ihe okike TV ha iji tinye ọdịnaya ọdịnaya zuru ezu, ebe izi ozi na-atụle uru / uru / iche / iguzosi ike n'ezi ihe nke ika ahụ yana uru ngwaahịa. Karịsịa maka ndị na-ere ahịa na-ere ọtụtụ ngwaahịa, ha ekwesịghị ilekwasị anya na otu akara na-enweghị mkparịta ụka banyere isi ahịa.
Ihe ịma aka bụ metric ahụ metụtara na echiche na nghọta nke ndị na-ege ntị. Ọ na-atụlekwa ebumnuche na mmetụta, dịka ọmụmaatụ ka ọ ga-esi bụrụ onye ahịa ga-akwado ngwaahịa ndị ọzọ, yana kedu ka nke ahụ si metụta ahịa sara mbara na ire ahịa. TV na-abata ebe a n'ihi na ọ bụ usoro kachasị mma maka ịkwaga ahịa otu ngwaahịa na-aga n'ihu ma na -emepụta mkpokọta akara ngosi. Ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ mgbe niile na ịmetụta ahịa site na ọwa niile, na TV na-enye ụzọ iji melite gafee ọwa ndị a site na ọdịnaya echekwara na ịmepụta akara ngosi.
Mgbasa ozi TV-centric nwere ihe okike siri ike ma nwee mmetụta na ngwakọta mgbasa ozi ziri ezi nwere ike ịnwe ogologo oge. Ha agagh enwe ike inwe mmetuta na ngwa ngwa edeturu kamakwa ha nwere mmasi na ngwa ahia nke egosighi ugbua na mgbasa ozi okike ma obu mgbasa ozi obula ma dabere na mgbali siri ike.
Na isi, ndị na-azụ ahịa na-azaghachi ihe okike maka otu ngwaahịa akpọrọ ndị ahịa ụfọdụ. Ma, ha na-ere ahịa na ngwaahịa niile na ndị niile na-ere ahịa akpado. George Leon, Onye isi oche Onye isi oche nke Media na Akaụntụ Akaụntụ na Hawthorne Direct
Ihe omume a na-egosi mkpa ọ dị maka okike na izi ozi dị ukwuu nke na-eweta akara mgbe niile n'ụdị dị ike na ntụkwasị obi. Ndị na-ere ahịa kwesịrị inyocha ule A / B na ihe okike na-emepụta ngwaahịa ma e jiri ya tụnyere ntinye akara ngosi zuru oke wee tulee nsonaazụ ya.
Ezigbo Ihe Nlereanya Ahịa Worldwa
Tụlee ngwongwo ngwaike nke arụpụtara na Lowe's, The Home Depot, na Menards. Maka mmụba nke mkpọsa na ire ahịa mkpọsa, ka anyị chee na ọ nwere nhata 8: 1 ruru arụmọrụ media (MER) na ngwaahịa ndị dị na mkpọsa ahụ nwere ihe karịrị nkeji 350 kwa akara Target Ratings. Ọzọkwa, ahịa a na-ebuli elu maka ngwaahịa ndị na-egosipụtaghị na ihe okike wee site na mgbakwunye 200+ karịa TRP. Maka ederede, a kọwara TRP dị ka 1 pasent nke ndị na-ege ntị ezubere (ọ bụghị ọnụ ọgụgụ zuru ezu) nke mgbasa ozi ruru, ọ bụkwa metric na-enyere anyị aka ịghọta mmetụta dị na mgbasa ozi TV. N'ihe atụ ahụ, enwere mmụba na ngwaahịa ndị anaghị akpọsa nke a na-ahụkarị na mkpọsa TV emezuru nke ọma.
Ka ndị ahịa na-aga n'ihu na-eme atụmatụ atụmatụ ha nke usoro mgbasa ozi 2017, ha ekwesịghị ileghara mkpọsa TV anya. Ọ bụ ezie na ọwa vidiyo dijitalụ dị ezigbo mkpa maka ndị na-azụ ahịa na-agbagharị agbagharị, mgbasa ozi TV dị iche iche na ngwakọta mgbasa ozi kwesịrị ekwesị na ugboro ole nwere ike ịchụpụ ahịa ma nye ika ahụ n'onwe ya uru bara uru.
Tags: Aleck Schleiderika inwegoika ebuli metricsnwee nkeruru arụmọrụ mediaAkwụkwọebe obibi
Jessica Hawthorne-Castro, onye isi oche nke Hawthorne, ejirila ọnọdụ mee ka ụlọ ọrụ ahụ guzosie ike na mbido mgbanwe azụmaahịa ọhụụ nke mgbasa ozi ebe nka na-ezute sayensị. Site na okike na imepụta ihe na mgbasa ozi na nyocha, Jessica na-etinye aka na ogo kacha mma na ihe ọhụụ na usoro ọzụzụ niile. Isi ọrụ ya gụnyere ịzụlite mmekọrịta ndị ahịa ogologo oge iji zụlite usoro mgbasa ozi dị oke mkpa ma nwee atụ, nke ezubere iji gbanye nzaghachi ndị ahịa ozugbo.
Task: Ọ bụ oge ka outsource gị Marketing aga-eme